Iwu 10 nke Pinterest maka Ahịa | Martech Zone
Iwu 10 nke Pinterest maka Azụmaahịa
Thursday, June 14, 2012 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Pinterest gara n'ihu ịbụ isi mmalite nke okporo ụzọ maka Martech… kachasị site na anyị Infographics Ahịa mbadamba. Anaghị m etinye oge dị ukwuu na Pinterest dị ka ndị ọzọ na-eme, mana m ghọtara kpamkpam ihe kpatara na ọ bụ nnukwu ikpo okwu. Ọ dị mma ma ịchọgharị ya. Nwere ike pịgharịa gafee ọtụtụ ozi n'otu mkpịsị aka gị!
Ihe ndị a na-atụ anya mgbe azụmaahịa sonyere na ọrụ dịka Pinterest dị iche karịa ndị na-azụ ahịa na-esonye, ​​agbanyeghị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka azụmahịa gị mee ka Pinterest nwee ike ịba ụgbọala, ịkwesịrị idozi nnukwu bọọdụ ma mee ka mkparịta ụka ahụ gaa n’ihu. Anyị ahịa, Ndepụta Angie, nwere ịtụnanya ọnụnọ na Pinterest… ikenye ọdịnaya na ihe niile si Omuma Omuma na Windows na Ọnụ rszọ.
Ndi mmadu bi iche na Mookoo Design weputara ihe omuma a, The Iwu 10 nke iji Pinterest maka Azụmaahịa, na-eduzi gị site na omume kachasị mma na ndụmọdụ maka itinye Pinterest n'ọrụ na usoro mgbasa ozi mgbasa ozi gị. Ihe omuma ihe a dabere na a biputere na blog nke Amy Porterfield.
Tags: Pinterestpinterest maka azụmahịa
Nkwupụta mmekọrịta mmadụ na n'ime nchịkọta Google
Jun 15, 2012 na 6:49 AM
M na-eji pinterest na ebe nrụọrụ weebụ m ma nsonaazụ ya dị mma, ọ si na peeji nke 7 ruo # 5 n'ime ihe na-erughị izu 2.
Isi ihe bụ na anyị ga-enwerịrị weebụsaịtị anyị nke ọtụtụ ndị na-atụgharị ma na-edegharị, nke bụ akụkụ kachasị sie ike. Imirikiti ndị ọrụ pinterest agaghị eme repin mgbe ha anaghị adị ka ihe anyị fụrụ.
M na-eme ihe dị mfe iji wepụta ya na fiverr ma nweta ndị saịtị m toro ndị 75, amaghị m etu ọ ga - esi mee ya naanị chọọ site na ịpị pinterest na fiverr na ị ga - ahụ ya na TOP. Ọtụtụ ndị ọzọ na-ere ahịa na-enye ọrụ pinterest na fiverr mana na ahụmịhe m, ha enweghị ike ịme ka weebụsaịtị m bawanye na SEO. Amaghị m ihe kpatara ya.
Ihe kpatara pinterest ji dị mma maka SEO:
1. Ikwesiri ping njiko nke pin gi na ebe nrụọrụ weebụ gi bawanye na SEO.
2. Ozugbo websaịtị anyị tụkwasịrị ya, ọ nwere akara backlinks.
3. Ọ bụ ezie na Pinterest anaghị akwado ederede arịlịka (ma e wezụga url njikọ), ọ ka zuru oke maka itinye isiokwu anyị na nkọwa.